Gonadotropin nokuti jekiseni (GnRH) - China Ningbo Second Uwandu hwemakemikari
Shuniu GnRH (akakodzera nomukaka mombe) Gonaderelin kuti jekiseni The National Kirasi chechina wemhuka mushonga [Description] chigadzirwa uyu chena kana kure-chena Ndinoda-nokuomesa bundu kana upfu. [Rinoshanda uye Use] chigadzirwa ichi kunogona kutoita pemhuka prepituitary shwanu kusunungura kemikari follicle-anotokonya (FSH) uye luteotropin kemikari (LH). It ane hunorapa kubatsira mhando dzose ovary chirwere, kunyanya nokuda follicular cysts. Rinewo ine zvainoita nyaya kuti tinogona kusvika ...
Shuniu GnRH (akakodzera dheri mombe)
Gonaderelin nokuti jekiseni
T iye national fourth class of new veterinary drug
chigadzirwa Izvi chena kana kure-chena Ndinoda-nokuomesa bundu kana upfu.
chigadzirwa ichi kunogona kutoita pemhuka prepituitary shwanu kusunungura kemikari follicle-anotokonya (FSH) uye luteotropin kemikari (LH). It ane hunorapa kubatsira mhando dzose ovary chirwere, kunyanya nokuda follicular cysts. Rinewo ine zvainoita nyaya kuti tinogona kuti chorionic gonadotrophin (HCG) kana LH. Inogona kurapa ovulation kukundikana follicle (kunonoka ovulation); rinogona mushandirapamwe kushandiswa chakagadzirwa fertilization, uye anogona kuwedzera chaizvo vanamba mwero estrous mombe. Uyezve, unowanzoshandiswa nokuda mangwanani dzichipfekeka kudzorerwa ovary pashure wakurukura akaora (mukati memazuva 40 pashure pakukurukura); kunogonawo kushandiswa nenguva estrus, nenguva chakagadzirwa insemination kuti kupfupisa hurukuro penguva kuti zvachose kugadzirisa bovine mbereko.
1.Curing ari follicular cysts: Zvinokurudzirwa kuti intramuscularly baya jekiseni Shuniu GnRH nokuda 200 mcg nokuda achirapa dzinonetsa follicular cysts; Zvinokurudzirwa kuti intramuscularly baya jekiseni Shuniu GnRH nokuda 100 mcg nokuda achirapa nyoro follicular cysts.
2.It inokurudzirwa kuti intramuscularly baya jekiseni Shuniu GnRH nokuda 100 mcg nokuda achirapa ovulation kukundikana.
3.It inokurudzirwa kuti intramuscularly baya jekiseni Shuniu GnRH nokuda 100 mcg nokuda achirapa ovarian quiescence.
4. Zvinokurudzirwa kuti intramuscularly baya jekiseni Shuniu GnRH nokuda 100 mcg kutsigira ovulation.
5. Rinogona mushandirapamwe kushandiswa chete Cloprostenol Sodium jekiseni (PG) nokuti nenguva chakagadzirwa insemination nokuda nomukaka mombe (nokuti yakanatsa kushandiswa uye chipimo chemushonga, tapota ona 19 fung peji iyi manual, Shuniu GnRH (akakodzera dheri mombe) )
Zvinonzi zvirege kushandiswa kukura kukwidziridzwa.
100mcg × mabhodhoro 10
Zvikachenge- airtight ezvinhu pamumvuri (pazasi 20 ℃).
Meat mazuva 7, Mukaka kwemaawa 12.
Previous: Estradiol Benzoate jekiseni (inonzi estrogen)
Next: LHRH-A2 kuti jekiseni Bovines & penguruve
Gonadotropin For jekiseni (Gnrh)